Ku qor liistada cusub ee 'Chrome 80' ogeysiiska xannibaadda iyo in ka badan | Laga soo bilaabo Linux
Bilaabidda nooca cusub ee Google Chrome 80 ayaa hadda la soo bandhigay, kaas oo la yimaada hagaajinta arrimaha amniga qaarkood waxayna keeneysaa astaamo cusub sida cusbooneysiinta tooska ah ee waxyaabaha isku dhafan ee HTTPS, wax ka beddelka 'cookies' ee 'SameSite cookies', is-dhexgalka isticmaalaha oo xasilloon ee ogeysiisyada, iyo astaamo dheeraad ah oo loogu talagalay horumarinta.
Chrome 80 wuxuu xoojiyaa amniga biraawsarka wuxuuna bilaabaa inuu xakameeyo cookies-ka goobta iskutallaabta ah. Soosaarayaasha, oo ay tahay inay la socodsiiyaan wax kasta oo laga heli karo biraawsarka, waxay sidoo kale ku daraysaa astaamo kala duwan sida isdabamarinta durdurinta, hagaajinta CSS, qurxinta qaabeynta warbaahinta, iyo qaabab kale oo badan
1 Maxaa ku cusub Google Chrome 80
2 Sidee loo rakibaa Google Chrome 80 Linux?
Maxaa ku cusub Google Chrome 80
Qaabkan cusub ee Google Chrome 80, biraawsarku wuxuu daryeelaa si otomaatig ah u cusbooneysiinta kheyraadka maqalka iyo muuqaalka isku dhafan Goobaha HTTPS adoo dib ugu qoraya URL-yada HTTPS adigoon dib ugu noqon HTTP. Haddayna dusha ka saarin HTTPS, Chrome waxay u xannibtaa si caadi ah, marka laga reebo sawirro isku dhafan oo weli la rari karo, laakiin Chrome ayaa u calaamadeyn doonta bogga "amni la'aan" kumbuyuutarka.
Halka nooca xiga ee Chrome 81 (la sii deyn doono Abriil) Google wuxuu leeyahay sawirro isku dhafan ayaa si otomaatig ah ugu cusbooneysiin doona HTTPS. Haddii aysan ku rarneyn HTTPS, Chrome ayaa xannibaya iyaga asal ahaan. Hadafka ugu dambeeya ee Google waa in la hubiyo in bogagga HTTPS ee biraawsarkooda Chrome, oo ay adeegsadaan in ka badan hal bilyan oo isticmaaleyaal ah, ay ku shubi karaan oo keliya kheyraadka hoosaad ee HTTPS.
Isbeddel kale oo ka dhex muuqda sii-deyntaan ayaa ah astaamaha SameSite (oo lagu soo bandhigay Chrome 51) si loogu oggolaado bogagga inay caddeeyaan in cookies-ka la xadidi karo iyo in kale isla macnaha guud ee goobta, rajada laga qabo in tani ay yareyn doonto dalab isweydaarsiga goobaha isweydaarsiga.
Chrome 80 waxay la timaadaa nidaam cusub oo nidaaminta kala-saarista cookie-ga, kaas oo daaweyn doona cookies-ka aan lahayn qiime lagu qiimeeyay SameSite. Sugnaanta ayaa laga heli karaa macnaha dhinac saddexaad waana in wali laga heli karaa isku xirnaanta aaminka ah, maxaa yeelay laga bilaabo hadda, Chrome 80 ayaa meesha ka saareysa dabeecadaha gadaal la jaan qaadi kara.
Waxa kale oo ay u muuqataa in laga bilaabo qaybtan Chrome 80, Google waxay isku dayeysaa inay ka dhigto codsiyo ogolaansho aan lagaraneyn wax dhib yar.
Chrome 80 hadda mararka qaarkood waxay soo bandhigi doontaa interface wargelin ah dejinta ogolaanshaha ka aamusan. Isticmaalayaasha biraawsarku waxay iskood u dooran karaan is-dhexgalka cusub. Google waxay sheegaysaa inay sidoo kale si otomaatig ah u hawlgalin doonto laba shuruudood: dadka isticmaala guud ahaan xannibaya codsiyada oggolaanshaha ogaysiinta, iyo goobaha ay heerka aqbalitaanku aad u hooseeyo.
Ogsoonow in adeegsadaha "aamusnaanta" laga heli karo kombuyuutarrada desktop-ka iyo taleefannada gacanta labadaba. Google ayaa sidoo kale qorsheyneysa inay dhaqaajiso tallaabooyin dheeri ah sannadkan gudihiisa si loola dagaallamo "bogagga internetka ee xadgudubka leh ee u adeegsada ogeysiisyada websaydhka xayeysiinta, ujeeddooyinka xun ama khiyaanada leh."
Tani waa mid waxtar leh maxaa yeelay soo dejinta qoraallada () waxay ku fulisaa qoraallada qaab-dhismeedka adduunka, taas oo sababi karta isku dhacyo magac iyo dhibaatooyin la xiriira, waxayna xannibayaan Shaqaalaha inuu ordo inta uu ka soo qaadanayo oo uu qiimeynayo qoraalka la soo dejiyey
Sidee loo rakibaa Google Chrome 80 Linux?
Haddii aad xiiseyneyso inaad awood u yeelatid rakibidda noocyadan cusub ee bog-shabakadeedkan oo aanad weli rakibin, waxaad kala soo bixi kartaa rakibayaasha lagu bixiyo xirmooyinka deynta iyo rpm boggeeda rasmiga ah.
Wadada buuxda ee maqaalka: Laga soo bilaabo Linux » Aplicaciones » Ku qor liistada cusub ee 'Chrome 80' ogeysiiska xannibaadda iyo in ka badan
Nooca beta ee Lightworks 2020.1 horay ayaa loo sii daayay wuxuuna la yimid isbadaladan